Linux na nnapụta! Distfọdụ distros na-alọghachi na ọdachi | Site na Linux
Linux na nnapụta! Distfọdụ distros na-abịa azụ ọdachi
Ọ dabara nke ọma, anyị ndị na-eji Linux nwere a dịgasị iche iche nke nchọpụta nsogbu ngwaọrụ. Ọtụtụ distros na-etinye ngwaọrụ ndị a n'otu ngwugwu anyị nwere ike iburu ebe ọ bụla ma ha nwere uru ịbụ CD Live, nke anyị nwere ike iji mee ha n'ejighị wụnye ha.N'ebe a, anyị ga-ekwupụta naanị ole na ole n'ime ọtụtụ Linux dịkarịsịrị adị n'ebe ahụ iji dị ka usoro nnapụta. Mgbe Windows nwụrụ, Linux na-abịa nnapụta!
2 Redo ndabere na Iweghachite
3 Ubuntu Na Na Na
4 Atọ n'Ime Otu Atọ
6 Ugboro abụọ
SystemRescueCd bụ usoro Gnu / linux nke bootable si cdrom nke eji arụzi usoro gị ma weghachite data gị mgbe okuku dara. Ọ na-anwa ịnye ụzọ dị mfe iji rụọ ọrụ nhazi na kọmputa gị, dị ka ịmepụta na idezi nkebi na draịvụ ike. O nwere otutu akụrụngwa sistemụ (nkewa, akụkụ, fstools, ...) yana ihe eji arụ ọrụ (ndị editọ, ọchịagha etiti abalị, ngwaọrụ netwọkụ). Ebumnuche bụ ime ka ọ dị mfe iji: naanị buut si cdrom ma ị nwere ike ịme ihe niile. Kernel sistemụ na-akwado sistemụ faịlụ kachasị mkpa (ext2 / ext3, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660), na faịlụ ntanetị (samba na nfs).
Ndị a bụ ngwaọrụ ndị bụ isi nke sistemụ:
GNU Nkebi bụ ngwa ọrụ kachasị mma maka edezi draịvụ draịva gị na Linux.
GParted ọ bụ mmepụta oyiri nke Partition Magic maka Linux.
Nkebi ọ bụ Ghost / Drive-image clone maka Linux
Ngwaọrụ sistemụ (e2fsprogs, reiserfsprogs, reiser4progs, xfsprogs, jfsutils, ntfsprogs, dosfstools): nye gị ohere ịhazi, mezue, wepu nkebi dị na draịvụ ike gị.
Sfdisk na-enye gị ohere nkwado ndabere na mpaghara weghachite tebụl nkebi
Nwere ike lee anya na peeji nke ngwaọrụ maka nkọwa ndị ọzọ.
SystemRescueCd dịkwa maka ndị ìsì. Ugbu a, ihe ntanetị Linux na-ekwu okwu Linux na-arụ ọrụ nke ọma, ma etinyela onye na-agụ keyboard na-ekwu okwu. Ọrụ a nwalere site na Gregory Nowak.
O kwere omume ịme nsụgharị omenala diski. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbakwunye ederede nke gị iji weghachite usoro akpaaka. O nwekwara ike ịbụ gbaa DVD emebere ya na SystemRescueCd na 4.2 GB maka data gị (ndabere, dịka ọmụmaatụ). Gụọ akwụkwọ ntuziaka ahụ maka nkọwa ndị ọzọ.
Dị mfe wụnye SystemRescueCd na eriri USB. Nke a dị oke mma ma ọ bụrụ na ịnweghị ike bido na CD. Naanị ị ga - e copyomi ọtụtụ faịlụ na pendrive ma gbaa syslinux. Enwere ike itinye usoro ntinye site na Linux ma ọ bụ site na Windows. Soro ntuziaka manual maka nkọwa ndị ọzọ.
Ozi ndị ọzọ | SystemRescueCd
Redo ndabere na Iweghachite
Redo Ndabere na Iweghachite bụ nkesa Linux lekwasịrị anya na ịme mbipụta nke diski diski na ndozi ndị ọzọ na mgbake.
Redo Ndabere na Iweghachite kwụpụtara maka obere obere ya, ihe na-erughị 70MB, ohere nke iji ya site na liveCD ma ọ bụ ebe nchekwa USB na-enweghị wụnye ihe ọ bụla na kọmputa gị, na ebe ọrụ dị mfe ma dị irè.
Redo Ndabere na Iweghachite ga-enye gị ohere ịnweta Linux ma ọ bụ Windows nkebi, dezie ha ma wepu ọdịnaya, sọfụ ịntanetị ma ọ bụ kwuo okwu site na izi ozi ozugbo, na ihe ndị ọzọ. Ma isi ngwá ọrụ nke Redo ndabere na Iweghachite bụ ọrụ nkwado ndabere ya. N'ihe ole na ole ị ga - enwe ike ịme nnomi nke diski gị ma si otú a weghachite ya ma ọ bụrụ na ịnwe kọmputa na kọmputa gị, ọ bụ Windows ma ọ bụ Linux.
N'ime ngwa ọrụ ọ webatara anyị nwere mmemme iji hụ ọkwa nke draịva anyị siri ike,PhotoRec, na-agbake ehichapụ faịlụ site na egweri biini ma ọ bụ ndabere ngwaọrụ nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta folda abụọ ma rụọ otu nnabata. Na ihe ndị a niile, anyị ga-agbakwunye Firefox, onye ndezi ederede na ọnụ iji nwee ike ịme iwu site na njikwa.
Na mgbakwunye, anyị nwere ndị ọzọ nke mepụta draịvụ ike ma ọ bụ nkebi ngwa ngwa, nke na-enye anyị ohere ịnweta usoro anyị ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ iji weghachite faịlụ ma ọ bụ folda site na draịvụ ike anyị n'ihi ọdịda usoro, ọ ga-ezuru iji ihe nchọgharị faịlụ ahụ ọ na-etinye iji nweta draịvụ ike anyị ma detuo folda kwuru na mpụga draịva mpụga.
Ozi ndị ọzọ | Redo ndabere na Iweghachite
Ubuntu Na Na Na
Nke a bụ ihe ọzọ n’ime ọtụtụ Ubuntu nwetara nkesa, lekwasịrị anya na nke a n'inye ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji nwee ike weghachite data anyị ma ọ bụrụ na ọdịda nke sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ nkebi. Ihe dị mma bụ na ndị ọrụ Ubuntu niile agaghị enwe nnukwu nsogbu na ojiji ya, na-eme ka usoro mmụta ahụ dị mkpirikpi ebe ọ bụ na a na-ejikwa ya site na njikwa ahụ, yabụ ọ bụrụ na anyị ejiri ọnọdụ a na Ubuntu ọtụtụ iwu anyị amatala otu iji ha.
Ihe ọzọ na-atọ ụtọ banyere nkesa a bụ ọmụmụ ihe, nke na-enye anyị ihe atụ bara uru nke mgbake data n'ọnọdụ ụfọdụ nke pụrụ inyere anyị ezigbo aka. Dị ka ọ dị na ikpe abụọ gara aga, ọ gụnyere ọtụtụ ngwaọrụ maka ijikwa faịlụ na nkebi, yana maka ịgbake data ehichapụ na mkpofu ahịhịa anyị.
Ozi ndị ọzọ | Ubuntu Na Na Na
Atọ n'Ime Otu Atọ
Atọ n'Ime Otu na-azọpụta Atọ n'Ime Otu (TRK) bụ nkesa Linux na-akwụ ụgwọ n'efu emere kpọmkwem iji weghachite ma rụkwaa kọmputa Windows. Fọdụ n'ime njirimara ya kachasị mkpa bụ ndị a:
5 mmemme antivirus dị iche iche na-eji otu iwu ahụ arụ ọrụ ma emelitere site na :ntanetị: ClamAV (clam), F-prot (fprot), Grisoft AVG (avg), Bitdefender (bde), Vexira (va).
Mfe iwepụ Windows okwuntughe.
Cloning NTFS faịlụ sistemụ na ntanetị.
Akụrụngwa na usoro nke na-agbake ehichapụ faịlụ.
Mgbake nke furu efu nkebi.
Multicast cloning ịba uru nke ọ bụla faịlụ usoro.
2 RootKits nchọpụta ọrụ.
Ozi ndị ọzọ | Atọ n'Ime Otu Atọ
CDlinux (Compact Distro Linux) bu ihe ngosiputa GNU / Linux nke sitere na CD ma adabara komputa nwere obere nchekwa. Ọ na-eji XFCE, dị fechaa na arụ ọrụ, ma tinyekwa ngwaọrụ iji kpọọ faịlụ multimedia, dezie akwụkwọ, sọọfụ ịntanetị, nkata ma dezie foto.
CDlinux enwere ike ijikwa ya. Anyị nwere ike bufee ya site na CD, DoC, Flash, ATA, SATA ma ọ bụ SCSI draịvụ, USB, ma ọ bụ IEEE1394 ụgbọ ala, ma wụnye ya na ext2, ext3, jfs, reiserfs, xfs, isofs na udf partitions, ịgụkwa hfs, hfsplus, abụba ma ọ bụ ntfs .
CDlinux na-akwado ọnụọgụ ngwaike na ngwaọrụ netwọkụ, yabụ enwere ike iji ya dị ka ihe ọzọ maka kọmputa ochie ma ọ bụ maka netwọkụ na ndozi ma ọ bụ ọrụ mgbake.
Ozi ndị ọzọ | CDLinux
RIPLinux bụ bootable CD ma ọ bụ USB na-enye anyị ohere ịgbake, mee nkwado ndabere, buut ma chekwaa sistemụ. RIPLinux na-akwado ụdị diski diski na ụdị nkebi, gụnyere Windows. Ọ nwere ọtụtụ uru: ọ na-enye ohere ịgbake usoro akpụkpọ ụkwụ mebiri emebi, na-akwado sistemụ faịlụ dị iche iche, nkwado maka klas dị iche iche nke diski na netwọkụ. O nwere 2 "cons" iji tulee: o choro ihe omuma di oke elu ma eme ihe niile site na njedebe.
Fetchmail, curl, wget, ssh / sshd, mutt, njikọ, msmtp, tmsnc, slrn, lftp, epic na Firedox na-akwado SSL
Ọ na-agụnye cdrwtool, mkudffs, na pktsetup nchịkọta iji kwe ka ederede na mgbasa ozi ngwa anya.
fsck.reiserfs na 'fsck.reiser4 iji lelee ma mezie reiserfs na reiser4 faịlụ sistemụ.
xfs_repair ịrụzi Linux xfs faịlụ sistemụ.
jfs_fsck iji lelee ma mezie Linux jfs filesystem.
e2fsck iji lelee ma rụkwaa Linux ext2 ma ọ bụ ext3 filesystem.
ntfsresize ka resize Windows NTFS system without data ọnwụ.
ntfs-3g inwe ike dee Windows NTFS sistemụ.
chntpw na-enye gị ohere ịlele ozi onye ọrụ na okwuntughe na sistemụ Windows.
cmospwd-enye gị ohere iji naghachi paswọọdụ si CMOS / BIOS.
Ozi ndị ọzọ | Ugboro abụọ
Mara: iji hụ ndepụta zuru oke nke nnapụta kacha mma, ana m atụ aro ka ịlele peeji a.
Extra isi mmalite: Genbeta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Linux na nnapụta! Distfọdụ distros na-abịa azụ ọdachi
Ha nwekwara ike ịgbakwunye na ndepụta F-nchekwa ma ọ bụ SupergrubDisk
Zaghachi David Salazar
@ aka.ezeigbo dijo
Ọ naghị amasị m iji atụnyere n'etiti ọtụtụ sọftụwia nke na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ, ọ na-amasịkarị m ịnweta ma jiri nke kachasị sie ike, anaghị m eji nke ọ bụla n'ime ndị a mana kedụ nke ị chere kacha mma ịnwe na mberede m ngwa XD
Zaghachi @ lllz @ p @
Rip ma ọ bụ systemrescue na-aga nke ọma
Ndewo Mario! Idozi onwe ya na-aga n'ihu. Ihe ndị ahụ gụnyere njikọ, chọrọ ka m lelee ha ma nye ya ọfụma. Ihe niile dị mma mgbe niile ... mana spammer na ọrụ anaghị efu. 🙁
Ọtụtụ oge na ndụ m dị ka onye ọrụ Linux, ekwesịrị m iji otu n'ime "nnapụta cd's" iji chekwaa kọmputa m ma ọ bụ nke ndị enyi m na ọ bụ mgbe ahụ ka ị hụrụ uru ha bara. Ọ bụ ya mere m ji were onye agha Switzerland m xD na-ebu otu ebe niile.
Ọ dị ezigbo mma, ọbụlagodi ndị na-eji windo ma jụ iji linux, ọ dị mma na ha nwere livecd kwadebere maka mgbe windo dara.
Ugbokodo 31 dijo
ezi ogbunigwe… nnukwu nchịkọta nnapụta diski ..
E nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ebe a, ọ na-atọ ụtọ ịtụle ma jiri nke ọ bụla masịrị.
Ogologo oge m ejirila Linux puppy dị ka distro nnapụta, karịsịa n'ihi oke nkwekọ ya na ngwanrọ ọ bụla siri ike na dịgasị iche iche maka nkwado ndabere, ọ na-ewetakwa clonezilla arụnyere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghachite ma ọ bụ mee ihe oyiyi.
Ugbokodo 86 dijo
Ọ dị ezigbo mma. M ebudatara System Rescue na Redo.
Nwa nkita bu ozo di uku nke ozo. Anaghị m agbakwunye ya na post a n'ihi na ọ nwere ike ịbụ ihe enyemaka nnapụta, ọ bụghị iji nzube ahụ ebubere ya ngwa ngwa. M kwughachiri ya, echere m na ọ bụ otu n'ime nsogbu kacha mma.
Ihe ncheta, ma ọ bụrụ na ịnwere Live CD, yana njikọta na netwọkụ nke netwọk, enwere ọtụtụ ihe iji rụkwaa usoro ọ bụla. Ajuju Have megharịala oke? Tupu ọ gwa m na ọ chọrọ nnwale, ihe tụrụ m n'anya
Zaghachi na @llomellamomario
Ah, ugbu a ka m ghọtara ihe imeru ihe na nke ọzọ, ọ tụrụ m n'anya. Daalụ maka nkọwa!
Na-akpali nnọọ mmasị chịkọtara. Nna m ejikwala Knoppix nwetaghachi data sitere na nkebi nke na-agaghịzi aba.
M na-eji SystemRescueCd a otutu ma na ihe karịrị otu oge (mgbe m na-enweghị ya na aka) M na-eji lubuntu cd na nke ahụ bụ ezuru m…. Kedu ihe m maara ... ị nwetara ihe ị nwere, nri?
Danpe 91 dijo
N'ezie n'eziokwu ozugbo m chọrọ iji weghachite ihu ma enweghị m ike ịme ya
M gbasoro ntuziaka sitere na ụfọdụ ibe, ọ dị m ka nke ubuntu
ma ọ rụghị ọrụ m: S
ị gaghị enwe nkuzi iji mee nke ahụ?
Zaghachi na Danpe91
Lee, nke a bụ ezigbo nduzi zuru oke: http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Recuperar_GRUB
Na ya mfe version:
Cheers! Enwere m olileanya na m nwere enyemaka ụfọdụ.
M tinye ihe ndị a 2 bara nnukwu uru site na ebe a: http://www.supergrubdisk.org/
Rescatux na Super Grub2 Disk
Missed tufuru Ime Anwansi
Zaghachi Eduardox 123
Naanị m gụrụ okwu a: Achọrọ m ịza ajụjụ na ya. SupergrubDisk dị mma ma na oke ikpe ma ọ naghị arụ ọrụ dị ukwuu; ọ na-aghọ ifuru meringue mgbe grub dị na hda ma ọ bụghị sda ... nke m nwere n'aka ma ọ dịkarịa ala, enweghị ike ịnwe ụdị ochie nke kernel ...
otú ahụ ka ọ dịkwa. n'eziokwu, ha abụọ nwere ike ịme ihe ọ bụla Linux distro. 🙂
ka isi mmalite a nọnyere gị. LOL.
na RipLinux enwere m ike nwetaghachi GRUB furu efu site na sistemu Linux?
ma enwere m ike ịbawanye oke nke nkewa ext4?
Ana m eme windo mgbake site na ọtụtụ n'ihi na m na-elekọta ụlọ nyocha na 23 compus, achọpụtara m na iji sava samba ị kwụnye ihe oyiyi ma kesaa ya na kọmpụta ndị ọzọ, achọwo m otu esi eme ya, ị nwere indea kedu nke a? daalụ
Agbalịrị m UDPCast nke ọma.
Can nwere ike ịghachite ehichapụ faịlụ ma ọ bụ foto site na iji Redo ndabere ???
Eleghara anya Ee. Lee njikọ na-esonụ, na ngalaba "Naghachi data furu efu":
Alfonso Ovidio López Morales dijo
Magburu onwe ya, ọ na - ewusi nnwere onwe gnu linux iji kesaa ihe ọmụma.
Zaghachi Alfonso Ovidio López Morales
Gtk + 3 adịworị n'etiti anyị!